नेपाली सेना के गर्न लाग्दैछ? सेनाको गुप्तचर देशका सबै स्थानीय तहसम्म । – Sadhaiko Khabar
निरन्तर गतिमा मेयर हर्क साम्पाङ, निर्वाचित भएको एक महिनामै धरानमा देखियो यस्तो चमत्कार :
नेपाली सेना के गर्न लाग्दैछ? सेनाको गुप्तचर देशका सबै स्थानीय तहसम्म ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: १२:०८:१२
काठमाडौं/ नेपाली सेनाले मुलुकका सबै स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर आफ्नै इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) विस्तार गरेको छ ।
अहिले ७७ जिल्लामा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई विस्तार गरेर सेनाले नगरपालिका र गाउँपालिका पालिका तह (७५३) सम्म पुर्‍याउँदै छ । ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड अवधारणाअन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रत्येक गाउँपालिका तहसम्म विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । सेनाको विस्तारित इन्टेलिजेन्सले ‘क्लान्टेस्टिन (केप्ट सेक्रेट एन्ड डन सेक्रेट)’ अवधारणाबाट काम गर्नेछ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सैनिक इन्टेलिजेन्स जिल्ला तहबाट पालिका तहसम्म लग्ने सेनाको तयारी रहेको बताए । ‘आफ्नो इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरेर सेनामा इन्टेलिजेन्स खडा भएको हो । हाल हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन् अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहसम्मै विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ,’ पौडेलले भने, ‘सेनाको यो आवश्यकता पनि हो ।’
‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ नाम दिइएको सेनाको निकायले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउन सक्ने, सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने समूह तथा संघ–संस्थालाई विशेष निगरानी गर्नेछ । त्यस्तै, इन्टेलिजेन्सले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ह्रास पुर्‍याउने बाह्य घुसपेठको सूचना पनि संकलन गर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ